Kheladi - लिगलाई एउटै चेनमा ल्याउन ‘यसो गरे कसो होला ?’
कुनै पनि देशको फुटबलमा लिगको भूमिका मेरुदण्डको रूपमा हुने गर्छ । त्यही लिगलाई केन्द्रमा राखेर समग्र फुटबल संरचना तयार गरिन्छ । हाम्रो देशमा पनि शुक्रबार सहिद स्मारक लिगको शीर्ष डिभिजन सुरु भएको छ ।
शीर्ष डिभिजनको लिग दशरथ रंगशालामा सुरु हुँदा स्वाभाविक रूपमा नेपाली फुटबलको माहौल तातेको छ । लिग र फुटबलका विषयमा चिया पसलदेखि नीति निर्माणको तहसम्म बहस हुन थालेका छन् । देशको सबैभन्दा लोकप्रिय खेलको ठूलो प्रतियोगिता भइरहँदा यस्तो चर्चा स्वाभाविक हो ।
फेरि पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लिग संसारकै सर्वोत्कृष्ट स्वरुपमा गरिरहेझै गरी आफैंमा मख्ख परिरहँदा यसको स्वरुपबारे विभिन्न कोणबाट बहस जारी छ । कसैले यस्तो लिगले देशको फुटबललाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन, यो समय र लगानीको बर्बादीमात्र हो भनिरहँदा कसैले भने नेपालमा योभन्दा बृहत स्वरुपको लिग सम्भव छैन भनेर तर्क गरिरहेका छन् ।
खासमा नेपालको बहुरूपी लिग र अस्तव्यस्त फुटबल संरचनाका कारण देशभित्र हामीले एउटै चेनमा फुटबल खेल्न सकिरहेका छैनौं । जिल्लाले आफ्नो हिसाबमा लिग गरिरहेको छ । जिल्ला लिग समापनपछि त्यहाँका टिमले कहाँ गएर खेल्ने भन्ने नै टुंगो छैन । यता केन्द्रमा पहिले देखि रहँदै आएको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन, ‘बी’ डिभिजन र ‘सी’ डिभिजन र ‘सी’ डिभिजन छनोटको आफ्नै संरचना छ ।
वास्तवमा लिग कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा आ–आफ्नै तर्क र विश्लेषण हुन सक्छन् । विभिन्न विकसित देशहरूले पनि गर्दै आएका फरक खालका अभ्यासले यही तर्क ठीक भनेर ठोकुवा गर्न नसकिएला । यहाँ त्यसो गर्न खोजिएको पनि होइन । यहाँ त लिग र समग्र नेपाली फुटबलको संरचनाबारे एउटा प्रस्ताव गर्न खोजिएको छ ।
साँचो अर्थमा फुटबल विकास गर्ने हो भने सबैखाले लिगलाई एउटै चेनमा ल्याउनुपर्छ । जिल्लाले जिल्ला लिग गर्‍यो, केन्द्रले आफ्नै लिग गर्‍यो । यस्तो तरिकाले कतै पुगिँदैन । जुन जिल्ला लिगलाई छनोट चरणको रूपमा खेलाइनु पर्दछ । अहिले ‘सी’ डिभिजनको छनोट भनेर काठमाडौंमा गराइने छनोट प्रतियोगितालाई जिल्लामा सार्नुपर्दछ । त्यसो हुँदा फुटबलको आधार भूमि देशव्यापी बन्न जान्छ ।
जिल्ला लिगलाई छनोटको माध्यम बनाउँदा च्याम्पियन भएर आउनेले ‘सी’ डिभिजनको छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था ठीक हुनसक्छ । नेपालमा ७७ जिल्लामध्ये ४८ जिल्लामा फुटबल संघ छ । जुन जिल्लामा जिल्ला फुटबल संघ छैन, उनीहरूलाई पायक पर्ने जिल्लामा छनोट खेल खेलाउने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गरेमा ‘सी’ डिभिजनको छनोट खेल्ने टोली ४८ हुनेछ ।
यसरी लिगका लागि टोली छनोट गर्दा उनीहरूबाट पनि सहिद स्मारक लिगलाई अपनत्व हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा जिल्ला र केन्द्रबीच जोडिन नसकेको पुलको काम यो नयाँ सोचले गर्नेछ । होइन भने त जिल्ला लिग हुन्छ, त्यहाँको विजेताले कहाँ खेल्ने त ? अर्कोेतर्फ ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिग पनि आफ्नै ढंगले अघि बढ्छ ।
जिल्लाका क्लब र केन्द्रका क्लबबीच विवादको जड नै यही हो । क्लबको आरोप जिल्ला फुटबल संघले केही गरेन भन्ने हुन्छ र जिल्ला फुटबल संघको आरोप क्लब आफ्नै तरिकाले चलेर जिल्लालाई बेवास्ता गर्‍यो भन्ने रहेको छ । क्लबको अर्को आरोप भनेको जिल्लाले झारा टार्ने हिसाबले मात्र प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने छ । क्लब र जिल्ला फुटबल संघबीच तालमेलको पूर्ण अभाव छ ।
लिग जुनसुकै देशमा फुटबल विकासको मेरुदण्ड हो । यहाँ त हामी मेरुदण्डमै विवाद भएर बसेका छौैं । त्यसैले जबसम्म हामीले एउटै चेनमा बसेर लिगको संरचना अघि बढाउदैनौं, तबसम्म जिल्ला र त्यहाँका क्लब तथा केन्द्रका क्लबबीच ठूलो खाडल रहिरहने छ ।
जिल्ला लिगको च्याम्पियनलाई क्वालिफायर खेलाउँदा सम्बन्धित जिल्लाबाट एउटामात्रै टोली आउँदा ‘सी’ डिभिजन छनोट थप व्यवस्थित र निश्चित हुन्छ । त्यसो हुँदा काठमाडौंबाट ‘सी’ डिभिजन छनोटमा एउटामात्र क्लब आउँछ । सम्रगमा उपत्यकाबाट तीन क्लब आउँछन् । यसले गर्दा जिल्लाका कुनै पनि क्लबले छनोटको अवसर गुमाउँदैनन् ।
ए, बी र सी डिभिजन लिगको वर्तमान संरचनामा रातारात परिवर्तन सम्भव छैन । तर, भएकोलाई नभत्काई परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । लिगमा अहिले १४ क्लब छन् । त्यसमा अब बर्सेनि कति क्लब झार्ने र कति क्लबलाई बढुवा गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्धारण हुनुपर्‍यो । यहाँ त मनलाग्यो भने रेलिगेसनबिना नै लिग हुन्छ । कुनै वर्ष एउटा क्लब घटुवा हुन्छ र एउटा क्लब बढुवा हुन्छ । कहिले दुईटा क्लब झर्छन् र दुई क्लब माथि उक्लिन्छन् । निश्चित केही पनि छैन । भद्रगोल अवस्था छ ।
जिल्ला लिगको च्याम्पियनलाई क्वालिफायर खेलाउँदा सम्बन्धित जिल्लाबाट एउटामात्रै टोली आउँदा ‘सी’ डिभिजन छनोट थप व्यवस्थित र निश्चित हुन्छ । त्यसो हुँदा काठमाडौंबाट ‘सी’ डिभिजन छनोटमा एउटामात्र क्लब आउँछ । सम्रगमा उपत्यकाबाट तीन क्लब आउँछन् । यसले गर्दा जिल्लाका कुनै पनि क्लबले छनोटको अवसर गुमाउँदैनन् । यसले तल्लो तहबाटै आधार बनाउँछ ।
अहिले क्लबमा पनि एउटा समस्या छ । जिल्ला फुटबल संघले गर्ने गतिविधिमा भाग नलिने क्लबहरू एन्फाले गर्ने ‘सी’ डिभिजन छनोट खेल्न हानथाप गरिरहेका हुन्छन् । यसले एकातिर फुटबललाई केन्द्रीकृत बनाएको छ भने अर्कोतिर जिल्ला फुटबल संघहरूलाई कमजोर पारिरहेको हुन्छ । जिल्लाबाट आउने व्यवस्था गर्न सकियो भने फुटबलको प्रशासनिक चेन बलियो हुन्छ र जिल्लाबाट पनि छनोट प्रतियोगितामा बलिया टिम आउँछन् ।
नेपालको फुटबल इतिहास त्यति लामो त छैन । यही ७०/८० वर्ष भयो होला । १९९१ मा जुद्ध शम्शेरको पालामा बल्ल नेपालमा फुटबल भित्रिएको हो । उनका नाति नर शम्शेरलाई हामीले फुटबलको पिता मान्ने गरेका छौ ।
राणाकालमा फुटबल सबैको पुहँचमा थिएन । यहाँ दरबार–दरबारमा मात्र फुटबल खेलिन्थ्यो । त्यो बेलादेखि नै जे जति संरचना थिए, ती सबै काठमाडौंमा नै भएकाले पहिल्यैदेखि नै फुटबल काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । यहाँ पनि एन्फाको केन्द्रीय कार्यलय काठमाडौंमा छ । केन्द्रीय कार्यालयले समन्वय गर्ने हो । यसकै आधारमा फुटबल काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित भयो भन्न मिल्दैन । तर गतिविधिले त्यही देखाउनु चाहिँ पक्कै पनि सुखद कुरा होइन ।
लिग कमिटीका संयोजक विज्ञानराज शर्माले केही दिनअघि खेलाडी डटकममा ‘वाइल्ड कार्ड इन्ट्री’ दिएर बाहिरका क्लब ल्याउनुपर्ने तर्क राख्नुभएको छ । जुन अहिले फुटबल वृत्तमा चर्चाको अर्कै विषय बनेको छ । उहाँको प्रस्ताव त्यति सान्दर्भिक पक्कै पनि होइन । यसमा फरक मत राख्न पाइन्छ । विगतमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कुनै क्लब वा संघ दर्ता गर्नुपर्‍यो भने पहिला उनीहरूलाई गतिविधि गरेर देखाउनुपर्थ्यो । जिल्ला र अञ्चलले सिफारिस गरेपछि मात्र दर्ताको प्रमाणपत्र पाइन्थ्यो । अहिले ‘ए’ डिभिजन लिगका जुन क्लबहरू छन्, ती सबै यही प्रक्रियाबाट आएका हुन् ।
नेपालमा पनि लिग खेल्ने प्रक्रिया छ, त्यो चरण पार गरेर आउनुपर्‍यो । एन्फाले सबैका लागि छनोट प्रक्रिया खुला गरेको छ । क्षमता भएका क्लबहरू नै छनोट चरण पार गरेर आउने हुन् । फुटबल विकास रातारात हुने होइन । यसका लागि समय चाहिन्छ ।
अहिले त पहिले नै क्लब दर्ता भएर आउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाइन्छ । ‘सी’ डिभिजन छनोट छ, ‘सी’ डिभिजन छ, ‘बी’ डिभिजन छ अनि ‘ए’ डिभिजन छ । यसमा पनि निश्चित प्रक्रिया त छ । पैसा भयो भन्दैमा कुनै क्लबलाई सोझै ‘ए’ डिभिजनमा छनोट त गर्नुुभएन नि । पैसाले मात्र हुने हो भने त धनी देशले सोझै विश्वकप खेल्न पाउनुपर्ने हो । तर पाइरहेका छैनन् ।
विश्वकप छनोटको पनि प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रिया पार गरेर आउनुपर्‍यो । हो, नेपालमा पनि लिग खेल्ने प्रक्रिया छ, त्यो चरण पार गरेर आउनुप¥यो । एन्फाले सबैका लागि छनोट प्रक्रिया खुला गरेको छ । क्षमता भएका क्लबहरू नै छनोट चरण पार गरेर आउने हुन् । फुटबल विकास रातारात हुने होइन । यसका लागि समय चाहिन्छ ।
क्लब कार्यालयको संरचना राम्रो छ, रंगशालाको संरचना राम्रो छ । १५ खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ भन्दैमा त्यसलाई वाइल्ड कार्ड इन्ट्री दिने हो भने नेपालका सबै धनाढ्यको एउटा–एउटा क्लब ‘ए’ डिभिजनमा होला । अनि यहाँको फुटबल कहाँ पुग्ला भन्ने चिन्ता पैदा हुन्छ ।
हामीकहाँ फुटबललाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने नारा लोकप्रिय छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा कोही गम्भीर देखिँदैनन् । यहाँ फुटबलको व्यावसायीकरणलाई खेलाडीले पाउने तलबमा मात्र जोडेर हेरिन्छ । खेलाडीमात्र व्यावसायिक भएर समग्रमा फुटबल व्यावसायिक हुने होइन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला खेलाडीलाई तलब दिने क्लब व्यावसायिक हुनुपर्छ । क्लब र खेलाडी त एउटै रथका दुई पांग्रा हुन् । दुवैलाई व्यावसायिक बनाउँदै सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । यो वातावरण बनाउने काम एन्फा र लिग कमिटीको हो । तर त्यसतर्फ केही सिन्को नभाँचिकन वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीको हचुवा कुरा गरेर हुँदैन ।
यस सिजनबाट सप्ताहन्त (विकेन्ड) मा मात्र लिग खेलाउने तालिका आएको छ । यो निकै सकारात्मक कदम हो । फिफाले नै एउटा खेलपछि खेलाडीले कम्तीमा ४८ घण्टा आराम पाउनुपर्छ भनेको छ । खेलाडीलाई लगातारको खेल तालिकापछि चोटबाट बचाउन पनि विकेन्ड लिग जरुरी थियो । खेलाडीहरूको वास्तविक परीक्षण यो लिगले गर्छ । विगमा लगातार खेल राखेर लिग सकाउने हतारो हुन्थ्यो । अहिले विकेन्डमा गर्न लागेको लिग सबै पक्षबाट राम्रो छ । तर दोहोरो लिग यसपालि पनि गर्न नसक्नु चाहिँ एन्फाको अकर्मण्यता हो ।
एन्फाले यसपल्टबाट लिगलाई जिल्ला बाहिर लाने भनेको छ । मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबले पोखरा रंगशालालाई आफ्नो घरेलु मैदान बनाएकाले लिगका केही खेलहरू त्यहाँ गराउन प्रस्ताव गरेको छ । मनाङले आफ्नो होम गेम त्यहाँ गर्छु भनेको छ ,त्यो होम गेम होइन । किनभने मनाङको दर्ता त काठमाडौंमा छ कि त स्थानान्तरणको प्रमाणपत्र लिनुपर्‍यो ।
होम एन्ड अवे लिग गर्नसके त्यो धेरै राम्रो हो । पूर्ण रूपमा होम एन्ड अवेको अवधारणामा लिग गर्न नसकेसम्म व्यावसायिकताको नारा एउटा सफेद झुटबाहेक केही हुने छैन । होम एन्ड अवेको अवधारणा नै त्यहाँबाट जम्मा हुने रकमबाट क्लबले आम्दानी गर्न सकोस् भनेर हो । तर यहाँ त एन्फाले क्लबको आम्दानीलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाइरहेको छ ।
मनाङको घरेलु मैदानका रूपमा रहेको पोखरामा लिगका खेलहरू लैजाँदा १३ टोली लैजानुपर्‍यो । यसले लिगको आर्थिक भार थप बढाउने म देख्छु ।
क्लबहरूले पनि लिगका क्रममा उठ्ने गेटमनीमा ध्यान दिइरहेका छैनन् । एन्फासँग लिगको तयारी खर्च यति देऊ भन्दै माग्छन् । आफ्नो आम्दानीको स्रोत थाहा हुँदाहुँदै केही नभन्ने अनि लिगको तयारीका लागि हात मात्र फिँजाउने ?
(ललितपुर जिल्ला फुटबल संघ तथा ‘बी’ डिभिजन लिगको टोली झम्सीखेल युथ क्लबका अध्यक्ष थापासँग खेलाडी डटकमका आशिष पुडासैनीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
लेखक ललितपुर जिल्ला फुटबल स‌घ तथा 'बी' डिभिजन लिगको क्लब झम्सीखेल युथ क्लबका अध्यक्ष हुन् ।
तीन अंकका हकदार थियौ, अवसर सदुपयोग गर्न नसम्दा अंक बाँड्न पर्योः सातदोबाटोका प्रशिक्षक केसी
नवप्रवेशी भएपनि सातदोबाटोसँग सर्तक भएर खेल्यौः फ्रेन्डसका प्रशिक्षम मिश्र